West Seattle - Vanpool - so Archives - Seattle Traffic
Category: West Seattle – Vanpool – so
Isku hagaajinta raacista lacag la’aanta ah WebseydkaRideshareOnline.com waa qorshe kale. Waxad ka heli kartaa raacis ama, haddii aad wadaneyso gaarigaaga, waxad ka heli kartaa dad kula raaca. Haddii aad tahay milkiile ganacsi ama maamule, waxa sii dheer dhiirri-gelinta ilahaasi, waxad sahmin kartaa ORCA For Business, oo ay ku jiraan fursado ay ku jiraan dib ugu celin lacagta […]
Soo gaabi waqtiga socdaalkaaga kuna baaqso lacag isticmaalka Metro Vanpool adigoo marin u helaya (buundada hoose) ee SW Spokane St. Bridge. Agosto 2021 oo dhan, King County Metro waxey ku siineysaa dadka cusub ee wadaaga raacidda faananka labada ugu horreeya lacag la’aan. Dallacaadda u qalmidda iyo jaranjarada loo marayo si aad u bilowdo Maabka Vanpools […]